State Counsellor returns from ASEAN summit in Australia – Ministry of Foreign Affairs
State Counsellor returns from ASEAN summit in Australia
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi arrived back in Nay Pyi Taw at 7.30 pm yesterday after attending the ASEAN-Australia Special Summit in Australia.
She was welcomed at the Nay Pyi Taw International Airport by Union Minister U Kyaw Tint Swe, Chairman of the Nay Pyi Taw Council Dr. Myo Aung, Deputy Minister U Min Thu and officials.
The State Counsellor left Canberra, Australia, by special flight yesterday morning and arrived in Sydney at 10:20am.
The delegation led by Daw Aung San Suu Kyi left for Singapore and arrived at Changi Airport at 5:05 pm, where they were welcomed by Myanmar Ambassador U Htay Aung and wife, Military Attaché Col. San Nyunt Oo and other officials. The delegation returned home byaspecial flight of Myanmar National Airlines.
ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ဩစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ တပ်မတော် အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ကင်ဘာရာမြို့မှ ဆစ်ဒနီမြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီ ၀၅ မိနစ်တွင် စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့မှ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ချန်ဂီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဌေးအောင်နှင့်ဇနီး၊ စစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စန်းညွန့်ဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထိုမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်း အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ည ၇ နာရီခွဲတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိကြရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမင်းသူနှင့် တာဝန်ရှိသူများက နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။